Indlela yokurekhoda ilizwi kwi-Mac yethu | Ndisuka mac
Indlela yokurekhoda ilizwi kwi-Mac yethu
Namhlanje kukho iindlela ezininzi kunye nokusetyenziswa ukurekhoda iaudiyo kwiMac yethu kwaye ngaphandle kwamathandabuzo yindawo elungileyo yomsebenzisi. Ndikhumbula kudala ukuba iinketho zazinyanzelekile ukusebenzisa imibhobho yesithathu kunye nokuba amakhadi ezandi aqhagamshelwe nge-USB ukwenza le misebenzi yokurekhoda ngelizwi kwaye nangona kuyinyani ukuba namhlanje sisisombululo esinomdla sokurekhoda isandi kwi-Mac yethu, akusekho mfuneko ibalulekileyo. Kuyinyani ukuba ukuba uzinikezele kulo msebenzi wobuchwephesha okanye wobungcali, nokuba une-podcast yakho, ijelo levidiyo okanye naluphi na uhlobo oluphakathi apho ufuna umgangatho olungileyo wokumamela, hamba "utyalomali" imali encinci, kodwa kumgaqo «nge Mac ecacileyo»Sinokwenza ushicilelo lweaudio ngokugqibeleleyo.
Into ekufuneka uyirekhodile iaudiyo kwiMac yakho zizinto ezimbini ezilula kakhulu ukuba ube nazo namhlanje: Isoftware (esiza kuyibona idityaniswe kwiiMacs zangoku) kunye nezixhobo zekhompyutha, iMakrofoni esele inayo iMac nganye. jonga ikakhulu kule post inxulumene nesoftware kwaye siza kuthetha ngayo Isixhobo somdlali esikhawulezayo ongumdlali wemultimedia osilelayo oyifakelwe yiOSX kuzo zonke iiMac zangoku.
1 Ungayirekhoda njani iaudio kwiMac
3 Imakrofoni enikezelweyo
4 Itafile yokuxuba
Ungayirekhoda njani iaudio kwiMac
Ukuqala ngaphandle kokufuna ukuzenza nzima ukurekhoda sanele ukuba ne-Mac.Ukurekhoda kulula kakhulu ukuwenza kwaye xa ilizwi lethu lirekhodwe kufuneka kuphela ukuguqula ifayile ye-MPEG-4 yeaudio, kwifomathi esiyifunayo ukuba sifuna ukuyitshintsha.
Ukuqala ukurekhoda kufuneka sivule i-QuickTime Player kwisicelo sethu kwiLaunchpad yethu, kwi-Finder> Izicelo okanye kwi-Spotlight. Nje ukuba sivule siya kuthi Cofa kwiFayile> Ukurekhodwa kweNew Audio. Ngoku kufuneka sirekhode iaudio ngqo kwaye siyigcine kwifolda okanye naphina apho sifuna khona.
Okokuqala, ukuba ukhetho oludlulileyo lokurekhoda umsindo wethu kwi-Mac alufuni nasiphi na isixhobo sangaphandle njengoko besitshilo ngaphambili. Ngokucacileyo kukho ithuba lokusebenzisa ezinye iindlela ukurekhoda iaudiyo kwaye nangona sisebenzisa usetyenziso olufanayo kwiMac, singasebenzisa umzekelo i-earphone kunye ne-mic eyongezwa kwi-iPhone yangoku (ii-EarPods) okanye nakweyiphi na i-smartphone yangoku. Kule meko ukusebenza kuyafana kodwa ukudibanisa ii-headphone kunye ne-3,5mm jack yazo.
Kwimeko yokufuna ukusebenzisa imakrofoni ezinikeleyo ukurekhoda iaudiyo kwiMac, sifuna iMicro leyo unesi-4-pin jack jack (Imigca emithathu kwisinxibelelanisi se-TRRS) kuba ukuba ine-3-pin jack (imitya emibini kwisinxibelelanisi se-TRS) ayinayo imveliso ye-mic kwaye ke ayivumeli ukurekhodwa. Kwezona mics ziingcali okanye ngaphandle kwezinto ekuthiwa zii-headphone ezinemakrofoni yezixhobo eziphathwayo, ukuphuma kwesinxibelelanisi kuhlala kuyi-XLR kunye Olu hlobo lwe-mic lufuna iadaptha ye-jack eyi-3,5mm ukuba awunayo ibhodi yokuxuba iqhagamshelwe kwi-Mac.
Ukuba into oyifunayo kukurekhoda ngendlela eyiyo okanye yobungcali, ingcebiso kukuya kwitafile yokuxuba ukunxibelelana neMac.Kwimakethi yangoku kukho iindidi ezininzi kwaye eyona nto intle kukuba ungayidibanisa nge-USB ukuya kwi-Mac emva koko kwitafile qhagamshela imic kunye nesixhumi seXLR esikhankanywe apha ngasentla. Ngaphandle koku, sinokuqhubeka nokusebenzisa isoftware efanayo ye-OS X yemvelo kuba isinika ukusetyenziswa ngokulula kunye nentuthuzelo xa sisiya kurekhoda umsindo.
Ngokucacileyo ukwenza ushicilelo olunye ngexesha, kungcono ukusebenzisa ii-headphone ngemakrofoni okanye ngokuthe ngqo kwimakrofoni yeMac, kodwa ukuba uza kuzinikela kuyo sikucebisa ngetafile efanelekileyo yokuxuba kunye nemakrofoni elungileyo apho unokongeza okanye ususe inzuzo ngokuthe ngqo kuyo ukongeza ekubeni ukwazi ukwenza lo msebenzi kumxube ngokwawo. Kule meko, i Isoftware yomenzi wokuxhuba Ukuze ukwazi ukurekhoda iaudiyo esemgangathweni, namhlanje kukho iimodeli ezininzi kunye neempawu ezibonelela ngezisombululo zabo bonke abasebenzisi.
Ngokwam, andinakutsho ukuba ndingumsebenzisi wokurekhoda iaudiyo kwi-Mac yalo naluphi na uhlobo, kodwa mva nje ndiyasebenzisana kwi-podcast yoogxa bethu kwi-Actualidad iPad (ethi apha ndicebise ukuba uyimamele) kwaye ekuqaleni bendisebenzisa enye enee-EarPods, nangona kuyinyani ukuba banikezela ngaphezulu komgangatho owamkelekileyo, bendinomdla kuzo zonke ezinye iimakrofoni ezizinikele ngakumbi kwintengiso. Kutshanje ndifumene imakrofoni endiyilindeleyo ukuba ndiyiphonononge kuba ndivela eMac, yimakrofoni enezinto ezinqongopheleyo kodwa enkosi kwikhadi leaudiyo le-iCemat Siberia ebendinayo ekhaya, iphucula kakhulu umgangatho weaudiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Indlela yokurekhoda ilizwi kwi-Mac yethu
Izimvo ezi-32, shiya ezakho
Enkosi. Ngoku ndiyazi ukuba kutheni ii-headphone zam ezinemic zazingasebenzi. Masibone ukuba kutyelelo lwam olulandelayo kwiMedia M ndifumana okuthile.
anatoli vazquez sitsho
Molo, ndineMacboock MacBook5,1 kwaye ndifuna ukuba yenze istudiyo sokurekhoda kwaye ukuza kuthi ga ngoku khange ndikwazi ukuyenza, kuba andazi ukuba ndiyibeka njani iaudiyo, umntu othile undixelele ukuba ayinakwenzeka ayinazichweba zoMlilo okanye andazi ukuba yintoni kwaye ngenxa yegalelo lemakrofoni awunako ukuyenza nge-USB, ke ndiyabuza, le macboock ayisilungele isitudiyo sokurekhoda.
Ndiyathemba ukuba umntu othile angandinceda ukusombulula le ngxaki.
Phendula kwi-anatolio vazquez
UFrancesc Boqueras sitsho
Ndibhala ithisisi yam yobugqirha. Ndifuna ukubhala kakhulu, kodwa ndiyacaphuka kwaye ndiyacotha. Ngaba ikhona inkqubo yeMacBook Air yam enokulazi ilizwi lam kwaye ibhale into endiyiyalelayo kwiscreen, ngqo kwifayile yeLizwi endiyisebenzisayo?
Ndibhala ithisisi ngesiCatalan.
Ozithobileyo, F. Boqueras
Phendula uFrancesc Boqueras
Ngaba uyifumene inkqubo yokurekhoda ilizwi lakho kuxwebhu lwamagama?
Kuya kufuneka ndibhale kakhulu
Okwangoku andiyifumananga inkqubo yokurekhoda ilizwi kwifomathi yokubhala ngqo kwiWotd. Kuya kufuneka sihlale sijonge.
molo, ndinengxaki nebhendi yegaraji 3. Ndifuna ukurekhoda ilizwi kwezinye iziseko zezinye izixhobo esele zirekhodiwe. Ndinepro track ekhawulezayo kunye ne-micro akg ukubona 220, kwaye xa ndizama ukurekhoda ilizwi kwigaraji, inkqubo iyayamkela imakrofoni, kodwa ayiyibeki esweni ... ndiyijonge kukhetho, ndathatha ukubona ukuba yaphuliwe njlnjl .. kodwa akukho nto kuloo nto, ngaba umntu othile angayisombulula ingxaki kum?
Jonga ukuba i-phantom (48v) ye-maudio yenziwe yasebenza ukunika amandla imic, loo modeli inikwe amandla.
Jonga ukuba ijelo lokungenisa ujongano lwangaphandle lwe-maudio. Oku kukhetho lweaudio ye-gband unayo.
Khange ndivavanye ujongano kodwa ndiyazi ukuba ixhaswe sisandi esisisiseko se-mac ngoko ke kufuneka sisebenze ngaphandle kweengxaki kwaye ngaphandle kokubeka ezongezelelweyo abaqhubi
Molo ndinengxaki efanayo, kwaye ukunxibelelana kwemakrofoni zobuchwephesha okanye nomxube, ndithenge ikhadi le-usb elilalelwayo, elibizwa ngokuba yi-imic, kwi-griffin kwaye lisebenza ngokumangalisayo
Molo, ndisandula ukuthenga ipro mac kwaye ndingathanda ukwazi ukuba umntu uyifumene na inkqubo yokurekhoda kwaye ibhalwe ngqo kwigama okanye kwiofisi evulekileyo.Ndiya eyunivesithi kwaye izakulunga kakhulu kum
Ndine-Imic, iminyaka, kwaye ndenza kakuhle. Yisixhobo esincinci, ayifuni mqhubi kuba iMac iyayiqonda kwangoko, kwaye unakho ukuqhagamshela nayiphi na imakrofoni. Njengesoftware ndisebenzisa iRekhodiPad, evelisa iifayile ze-mp3, kwaye isebenza kakuhle nakum. Ndidibanisa ezinye ii-headphone kunye nemakrofoni yeLabtec kunye nokutsala, ukurekhoda phantse, okanye phantse, umgangatho wobungcali.
Ndine-mac osx kangangeenyanga ezi-6, ndifuna ukurekhoda kwibhendi yegaraji ilizwi kwezinye iithrekhi zangaphambili esele ndizenzile, (bass, percussion, loops ...), ngoku ndifuna ukubona ukuba ziphi iindlela ezikhoyo Ukurekhoda ilizwi, ukuba ndiyifumana imakrofoni (yeyiphi?) Kwaye ilizwi lifakiwe kunye nezinye iingoma esele zikhona okanye zibekwe sele zirekhodwe mp3 (okanye nantoni na ebhetele) kwaye uyibeke ngokuthe ngqo njengengoma enye .
Yeyiphi indlela yokufumana olona hlobo lwesandi lubalaseleyo?
Ndixakiwe kwaye ndifuna uncedo… ngokungxamisekileyo.
1000 enkosi kwangaphambili 😉
Ukuba uza kucula, eyona nto intle kukufumana itafile encinci yokuxuba kunye nemakrofoni elungileyo. Ungayibeka itafile ngokufaka umgca kwi-Mac yakho.
Rekhoda, ibhetele kwigaraji, kwingoma entsha.
Edgar garcia sitsho
Uxolo ngombuzo, ndinomxube kwaye ndinonxibelelwano lwee-8 zomsindo kodwa andazi ukuba ndingarekhoda njani ilizwi kwi-mac endaweni yomdibaniso, nceda uncede
Phendula uEdgar Garcia
Andisazi isikhombisi esibonakalayo se-DJ 8 kodwa ndiyabona ukuba apha bathetha ngayo http://www.native-instruments.com/forum/showthread.php?t=72794
Ndinengxaki, ndiya kukhetho lwenkqubo> isandi> igalelo kwaye ndinokhetho lwangaphakathi kwimakrofoni, andinalo ukhetho lokufaka umgca wokumamela
kukho umntu onokundinceda
Ndine-macbookpro 13 ″ kunye nengwe os
wave !! Ndine-13-macbook pro enehlosi os kwaye ndingathanda ukufumana indlela yokubhala ngombhobho. Kuya kufuneka ndibhale kakhulu kwaye kungaluncedo ukuba ikhompyuter ibhale yonke into endiyithethayo. ingandisindisa iintsuku! Ndingavuya kakhulu kuye nabani na onokundinceda
Inokuxhomekeka kwimodeli yekhekheyalk kodwa kumgaqo ewe, kungcono ukuba uthathe imodyuli uyise kumthengisi weapile kwindawo yakho ukuze uyivavanye kwaye ubone ukuba isebenza njani.
Molo, ndingathanda ukwazi umgangatho wokurekhoda we-mac, okwangoku ndinayo i-pentium 4, enemakrofoni elungileyo kunye nekhadi lesandi le-cakeandalk, kodwa ndifumanisa ukuba umgangatho wokurekhodwa uyaphucuka. Ndingayisebenzisa ikhadi lesandi kunye ne-IMAC? iyahambelana?
Enkosi ngoncedo lwakho, iinyanga zilwela i-mac yam ukuba ibone imakrofoni yangaphandle kwaye ngoku ndiyazi ukuba kutheni ingakhange isebenze enkosi ngokunceda abaninzi ... emhlabeni.
Molo, ndinengxaki, i-macbook yam ayiyiboni imakrofoni yee-headphone zam, kwaye sele ndiyijongile nge-iPhone yam kwaye ukuba iyasebenza njengoko ndiyenza, ukhetho luya kufuneka lubonwe ... uncedo
Ngendlela endiyifuna ngayo ukuyalela isicatshulwa kwigama ... ndinayo iMacspeech Dictate ... iyabiza kodwa ndicinga ukuba kufanelekile.
Koko kufanelekileyo, bendifumana idizzy kwinto enye. Sele ndifuna ukuthenga iseti yentloko ye-USB ukuze ndikwazi ukwenza i-videoconferencing xa ngequbuliso, ndifunda iMac Pro incwadana, ndiye ndaqonda ukuba iaudio engaphandle ye-OUT yeefowuni ivumela unxibelelwano lwendlela eyi-4 yejackphone kunye nemakrofoni, umzekelo leyo iza ne-iPhone. Ngale nto uyakuba nemicro, kwaye ungabizi kakhulu. Konke okugqibelele.
Ndidinga uncedo ngokungxamisekileyo.Ndine-macbook, i-allien kunye nomxube wobushushu kunye nemakrofoni ye-AKG kwaye ndifuna ukwenza ushicilelo nge-usb kwaye ayizukundivumela ukuba ndive umkhondo wokuqala osele urekhodwe, oko kukuthi, ingoma xa ndivula ijelo lesibini kwaye uqhagamshele i-usb…. umzila wokuqala uyayeka kwaye awundivumeli ndive, ndincede nceda, ndiyakubulela bonke ubomi bam, enkosi.
Ngokutsho kwesoftware. I-Logic pro kunye nebhendi yegaraji mayikwenze oko. I-Logic yeyona nto ilungileyo ikhona kwi-Mac kwaye ngokuqinisekileyo isebenza kakuhle nekhadi lakho.
Uncedo olungxamisekileyo !!! Ndirekhoda intetho kwimac yam encinci engenasiphumo sesandi kwisithethi okanye kwiifowuni, ndiyenza ngeadaptha ye-usb kwaye ndidibanise imakrofoni yam kunye neefowuni zeefowuni kule nto, umgangatho awukho mbi kodwa unayo Ingxolo yomgangatho endifuna ukuwucima nceda undincomelele, ingxamisekile ...
Vavanya ngokudibanisa nayiphi na indawo yentsimbi yangaphandle ye-mic okanye iadaptha emhlabeni. Ukuba oku akuyiphelisi ingxolo, kuya kufuneka utshintshe isixhobo ukuze usebenzise ipro.
Sihlobo, ucebisa njani ukuba ndenze uqhagamshelo lomhlaba? Ngentambo okanye into? Enkosi ngoncedo lwakho…
Ndifuna ukurekhoda kwibhendi yegaraji ngemic yangaphandle kunye negitare yombane, kodwa ipro ye-macbook inesiphumo sesandi kuphela. Ndiyifundile ukuba imveliso / igalelo kwaye ungayiguqula kwiphaneli yokukhetha isandi kodwa ndibona apho ndiza kuyenza khona.
Phendula u-Angel González
UJuan Almer sitsho
Molo, ukubeka iaudiyo kwi-mac ungathenga imakrofoni ngegalelo le-USB, eMexico, kukho iiposos ezingama-800 embindini weSixeko saseMexico okanye ungazithenga kwi-Intanethi. Qiniseka ukuba ulandela le ndlela ilandelayo 1-inkqubo ekhethiweyo 2 yeaudio 3 khetha igalelo le-USB, ewe xa sele unayo imakrofoni edityanisiweyo. Ngalo lonke ixesha berekhoda ngebhanti yegaraji, kuya kufuneka wenze okufanayo kodwa ngeli xesha uye 'kukhetho' lweGarageband, ndiza kuvula itab, i-icon yesibini ithi i-audio / MIDI kwaye ke apho ukhetha igalelo le-USB. Ii-microphone ze-USB zinonxibelelwano oluncinci olunikwe amandla yi-USB. Isandi oya kuba naso ngokuqinisekileyo siya kuba ngcono kunesandisi-sandi esakhelweyo, kodwa asizukufana nesiza somculo esineengcali. ukuba ufuna iaudiyo engcono kuya kufuneka utyale imali kujongano kunye nemveliso ye-USB kunye nemakrofoni ... musa ukwenza nzima ukuthenga imakrofoni ye-USB, zininzi iimveliso, ziya kuvakala ngcono kunomsindo odibeneyo, imibuliso
Phendula kuJuan Almer
Ukuphinda ujonge sitsho
Ndine-pro pro 13 kwaye ndiceba ukurekhoda iingoma ngokwazisa iaudiyo evela kwikhonsoli enesiphumo se-usb, kwikhonsoli ndiceba ukufaka imakrofoni elungileyo, ndicela ukuba isebenze…. Ndicela uncedo lwakho …….
Ingelosi Fernandez Martinez sitsho
Ndithathe ikhosi yesiNgesi yendlela yeVaughan. Kude kube ngoku, ukurekhodwa kwelizwi lam kwimithambo ekufuneka ndiyenzile kusebenze kakuhle. Ngenxa yoku yandicela ukuba ndisebenzise iAdobe Flash. Kodwa ngequbuliso ayizukundixhasa nangona ndiyifakile amaxesha ngamaxesha. Ngaba ikhona enye indlela yokusebenzisa esinye isicelo ukurekhoda ilizwi ngaphakathi kwekhosi?
Phendula u-Ángel Fernández Martínez
Enkosi kakhulu ngoku ndinokurekhoda.
Amanye amagama emveliso abhaliswe yiApple eYurophu nase China
Izixhobo ezixabisekileyo, simahla ixesha elilinganiselweyo Ivenkile yeeVenkile ze-Mac